यूट्यूबमा भिडियो हेरेरै मासिक ४० हजारसम्म कमाउन सकिन्छ ! – आइसिटी खबर:सूचना सञ्चार तथा प्रविधि खबर ICT Khabar.com : No.1 Tech INFO ICT News Site
Home / आइसिटी मार्केट / यूट्यूबमा भिडियो हेरेरै मासिक ४० हजारसम्म कमाउन सकिन्छ !
ICT Khabar/आइसिटी खबर June 25, 2019	आइसिटी मार्केट, आइसिटी रिपोर्ट Leaveacomment 326 Views
काठमाण्डौ । यदि तपाईं यूट्यूबमा भिडियो हेर्न मन पराउनुहुन्छ भने तपाईको यही सौखलाई उपयोग गरेर प्रत्येक महिना ४० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ । यो काम गर्न तपाईंसँग मात्र दुई चिज हुन आवश्यक छ । पहिलो, इन्टरनेट कनेक्सन र दोश्रो चिज हो दैनिक भिडियो हे
र्नका लागि केही घण्टा समय ।
Previous प्रहरीले फेसबुकबाटै सोधपुछ ! सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैको चरित्र हत्या गर्नु कानुन विपरित
Next इरानमा अमेरिकाद्वारा साइबर आक्रमण